Android နောက်ခံပုံများ Android အတွက်နောက်ခံပုံများ Androidsis
သင်၏ Android ကိုအကောင်းဆုံးနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ Android အတွက် mobile wallpapers နှင့် wallpapers။ Wallpapers များသည်သင်၏ Android ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအစိတ်အပိုင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ ါသနာများ၊ အရသာများသို့မဟုတ်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏ဓာတ်ပုံကိုတိုက်ရိုက်ပြသရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အကယ်လို့သင်ဟာ Android wallpaper မှာရှာဖွေနေတာကိုတတ်နိုင်သလောက်လှပနေရင်ဒီနေရာမှာအမျိုးအစားအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ပြသပါမယ်။
1 Android နောက်ခံပုံများရယူပါ
2 သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကို Android wallpapers နဲ့ဘယ်လို personalize လုပ်မလဲ
3 Android ပေါ်မှာနောက်ခံပုံပြောင်းနည်း
4 Android တွင်နောက်ခံပုံပြောင်းရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု
မည်သည့်ပုံကိုမဆိုလက်တွေ့ကျကျသင်ထည့်နိုင်သည် android အပေါ်နောက်ခံပုံ။ ပြနာကအင်တာနက်ရှာဖွေမှုလုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အချိုးအစားအမြောက်အများကိုအလွယ်တကူရှာရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အချိန်ဖြုန်းလိုခြင်းမရှိပါကအောက်ပါလင့်ခ်များသို့ သွားရောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြခန်းကိုအမြဲကြည့်နိုင်သည်။
အောက်ခြေ ၁၈: ၉
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်စုဆောင်းထားသည့်ရန်ပုံငွေအားလုံးသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ပုံမှာပြထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေအားလုံးကိုငါတို့နားလည်တယ် androidsis.com သူတို့ဟာအများဆိုင်ထဲမှာရှိနေပြီးအင်တာနက်မှာတွေ့နိုင်တယ်။ မရရှိလျှင်၊ အီးမေးလ်က မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကိုလေးစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စ်မှအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကို Android wallpapers နဲ့ဘယ်လို personalize လုပ်မလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောနောက်ခံပုံပါ ၀ င်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားမှုနောက်ခံသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုက်ညီသောနောက်ခံတစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုဖွယ်ရှိသည်။ ငါပစ္စည်းတစ်ခုစတင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်၊ မိုဘိုင်း (သို့) အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ရှိအခြားမည်သည့်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းမဆိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနောက်ခံတစ်ခုထားခြင်းနှင့်၎င်းကိုပြောင်းလဲလိုက်သည့်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ပင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နာရီတိုင်း။ ဒါပေမယ့်Android ပေါ်မှာနောက်ခံပုံတွေဘယ်လိုပြောင်းမလဲ?
ကွဲပြားသော Android ဗားရှင်းအရေအတွက်နှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အတိအကျကိုဖော်ပြရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် Android5အသုံးပြုထားသော Nexus 6.0.1 တွင်၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်စသည်တို့ကိုရှင်းပြပြီးထည့်သွင်းနိုင်သည်။ နည်းနှစ်နည်းဖြင့်ရှင်းပြပါမည် မည်သူမဆိုသူတို့၏ Android ထုတ်ကုန်၏နောက်ခံပုံများကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက်၎င်းသည်တစ်ခုထက်ပိုသောအမျိုးအစားများကိုဖုံးလွှမ်းရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်တစ်ခုဖြစ်သည်
ဤဖြစ်စဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သို့သော်အချို့သူများအတွက်လွယ်ကူသောအရာသည်အခြားသူများအတွက်အနည်းငယ် ပို၍ ရှုပ်ထွေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားသည်။
ဖန်သားပြင်အတွင်း, ငါတို့«နောက်ခံပုံ»ရိုက်ထည့်ပါ။ အချို့သောကိရိယာများတွင်၎င်းသည် "နောက်ခံ" အဖြစ်သာပေါ်လာနိုင်သည်။
အချို့သော Android ဗားရှင်းများတွင် - ၄.၄.၂ Samsung TouchWiz၊ အဆင့် ၄ တွင်၎င်းကိုပင်မမျက်နှာပြင်၊ သော့ခတ်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်ထည့်လိုသည်ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်မှုသည်တိုက်ရိုက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ နောက်မှပြထားသောရုပ်ပုံများကိုကာတွန်းနောက်ခံပြခန်း၊ နောက်ခံပုံများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းမှမည်သည့်နေရာတွင်ယူရမည်ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ ကြွင်းသောအရာကရှင်းပြခဲ့ရာဆင်တူသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ကြီးမားသည့်ဓာတ်ပုံကို download လုပ်ခဲ့လျှင်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါလိမ့်မည် ဓာတ်ပုံ၏ resolution ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ လွယ်ကူစွာ။
တစ်ဦးလည်းမရှိ အခြားနည်းလမ်းနည်းလမ်း Android Device အမျိုးအစားဘယ်လောက်ပဲရှိရှိသင်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ၎င်းသည်ပုံတိုများသိုလှောင်ထားသည့် (သို့) ဖိုင်စူးစမ်းသူအပါအ ၀ င်မည်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်မှဖြတ်လမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ခံနည်းလမ်းဖြင့်နောက်ခံပုံပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ရမည် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ခံဟုသတ်မှတ်လိုသောပုံသို့နောက်ခံ၊ ကင်မရာ၊ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများကိုမမြင်မှီတိုင်အောင် နှိပ်၍ ဖိထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်« Set as ... »ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့သူတွေထဲမှာလိုချင်တဲ့ option ကိုရွေးလိုက်တယ်။
အကယ်၍ သင့်တွင်အနည်းငယ်သောဟောင်းသောစက်ရှိပါကပုံကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်ရွေးချယ်မှုမျှမပြနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏ကိစ္စဖြစ်ပါကထိုထိမှုကိုအခြားတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည် Options ခလုတ် သင့်ကိရိယာ၏။ သင်သိသည်နှင့်အမျှ Android ထုတ်ကုန်တော်တော်များများတွင်သုံးခလုတ်သုံးခုရှိသည် - အဓိက (သို့) စတင်ခလုတ်၊ နောက်တစ်ဆင့်ပြန်လှန်ရမည့်သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့ထိလိမ့်မည်။ ဒါကသင်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆင့် ၃ မှာသင်ထိရမည့်ခလုတ်ဖြစ်သည်။
ဘယ်ကရလဲ မိုဘိုင်းဖုန်းများ? ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်ကိုအသွင်အပြင်ပြောင်းစေရန်အတွက် wallpapers ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းနှင့် Android wallpapers အသစ်များကိုထည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်၏အရင်းအမြစ်များကိုပြောပြပါ။